I-PIVX inomNxibelelanisi omtsha weTshintsho! | PIVX
I-PIVX inomNxibelelanisi omtsha weTshintsho!
Ukuba ufunde esi sihloko, uyazibuza ukuba kwenzekani kum, @Fused_Helios ukulawula ukuCwangciswa kweTshintsho. Umbuzo omuhle ukuwubuza, kodwa ungakhathazeki. Ndasondelwa ngu @s3v3nh4acks kunye no @Eric_Stanek ngezinye iindaba ezazonwabisa. Kuvela ukuba @John M. wayefuna ukuza ebhodini kunye neqela le-PIVX kwaye bonke bafike kwisivumelwano malunga nemigomo. Xa beza kum nomphumo wale mvu melwano, ndavuma ukuba kwakuyithuba elimangalisayo kwi-PIVX. Unokufunda ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu, kodwa ngokufutshane, ndiza kudlula isihloko se-Exchange Coordinator kunye noxanduva lukaJohn.
Kulabo abaye balandela isiphakamiso sam esi sihloko, uyazi ukuba inxaxheba yeCash Coordinator indima ithatha isihlalo sokubuyela kumavidiyo e-PIVX Class. Oku akuzange kube ngqalelo yam, kodwa i-PIVX yayidinga ilungu elisemthethweni ukulawula izivumelwano ezikhoyo zangoku kunye nezitsha. Ekubeni ndibe nexesha elithile elifumanekayo kulo msebenzi kwaye ndinelungelo lokwenza oko, ndagcina ndithatha inxaxheba. U-John, nangona kunjalo, ngumntu ofanelekileyo ngakumbi kule nxaxheba kwaye kuya kuba yinto eninzi kwimigudu yethu ekufumaneni i-PIVX kunye neengxoxo ezongezelelweyo. Ngokuphathelele isabelo-mali esabelwe mna kulo mzamo, intsalela yekota yam iya kuthunyelwa kuYohane.100 I-PIV ngenyanga yayisetyenziselwe ukuHlanganiswa koTshintshiso. Ndenzile i-roll yeenyanga enye, ngoko i-PIV engama-200 iyathunyelwa kuYohane.
Endaweni yokuchaza izakhono zikaJohn kuwe, ndamcela ukuba abhale isingeniso esincinci kuwe, ngoko ke umbhalo osesele apha uza kuba ngowomntu ngokwakhe. Ndiyabulela inkxaso yakho yomsebenzi kude kube le ngongoma, ndiyakukhuthaza ukuba ubonise uYohane uthando olufanayo.
“Igama lam nguJohn M. NdingumKhanada kwaye ndiye ndaqala ukukhala nge-crypto ukususela ngo-2012. Ndiye ndasebenzela ezinye zezona zidibaniso ezinkulu ze-crypto kwaye ndidibene neenombolo ezinxulumene ne-crypto ezifanayo kunye namashishini. Ugxininiso lwam oluphambili luhambelana nokuthotyelwa, ngokukodwa ukuyila iikhompyutheni ze-KYC / AML / i-ATF ezibandakanyekayo kwiiprojekthi ze-crypto, amaqela okuxhasa ngenkxaso-nkqubo kumgaqo-nkqubo omtsha, ukuncedisa isigqibo sokuba yeyiphi enye imali eya kudibaniswa kwintsebenziswano kunye nokuqhuba uphando.
Ndakuva ngePIVX kwaye ndazi ukuba ndifuna ukufunda okunye. Ndidibene namalungu omphakathi, abanye abaphuhlisi kunye nabanye abantu abenza ngokwenene iPIVX. Ndiyakwazi ukuthetha ngokunyanisekileyo, ngaphandle kokungabaza, ukuba iqela le-PIVX kunye noluntu lusezandleni eziphantsi kweyona nto ibhetele kuyo yonke indawo. Ulwazi kunye nomdla endikubonile kumalungu oluntu uyamangalisa. Ndacelwa ngamanye amaqela e-PIVX kunye noluntu ukuba ncedise ukuzisa i-PIVX kwinqanaba elilandelayo ngokubamba ukuhlanganiswa kweenguqulelo. Oku kuquka ukufumana utshintsho olutsha kunye neenkonzo ze-PIVX kwakunye nokugcina ubudlelwane kunye neengxoxo kunye neenkonzo. Kwakhona, ukwenza iinkonzo eziqinisekileyo zinezikhwama zazo ngokusesikweni kwaye zihamba kakuhle.
Ndiyayihlonipha kuba ndiceliwe, kwaye ndikhangele phambili ekusebenzeni nePIVX. Andizange ndifumane ngaphandle kokufudumala ngoku kwaye ndifuna ukubonga bonke abantu.
Ukuba nabani na unemibuzo malunga nesimo sotshintsho lwangoku, okanye ubone isikhwama esifuna ukukhutshwa kwintlawulo okanye ukuba neentloko zetshintshiselwano entsha ukujonga, nceda ukhululeke ukuba undiphose i-imeyili [email protected] , okanye, ndifumene kwigumbi lokuhlukana.
Ndiyabulela wonk ‘ubani, kwaye ndikhangele phambili ekusebenzeni nani nonke ukuba niluncede ngokwenene iPIVX. “